yakakwana renji yeAVR, UPS, Inverter uye Shanduko
Kutengesa anopfuura makumi matanhatu nyika nenzvimbo, zvinokurudzirwa nemhando dzinozivikanwa
Wepamusoro 5 Chinzvimbo
Wepamusoro 5 mugadziri weAVR Zvigadzirwa muChina vashandi ve350, 40,000 nzvimbo yekugadzira ine zvivakwa zvemberi
Yakaratidza Hunhu & Dhirivhari
Kambani ISO9001: 2015 & IMPS GB / T29490-2013 Certified Strict QC maitiro uye manejimendi
Staba Magetsi Co., Ltd.. hwakagadzwa muna 2010, iri Zhongshan, China-chokufambisa nomusimboti Guangdong-Hong Kong-Marco Greater Bay Area. Staba inogadzira inogadzira muindastiri uye zvakare inozivikanwa pasi rese OEM mhando yemagetsi & emagetsi ekugadzirisa mhinduro. Zvigadzirwa zvedu zvikuru ndezve Automatic Voltage Stabilizers (AVR), Simba risingapundiki Magetsi (UPS), Inverters / Solar Inverters, Diki & Pakati Pakati Sushani Brushless DC Motors, ma module ekudzora eBMDC motors, nezvimwe.
Staba ine 43,000 sqm yefekitori yezvazvino yakavakirwa, iine kiyi yakakosha yezvivakwa zvekugadzira inosanganisira:
- Metal cabinet tooling & tsikwa musangano,
- Shanduko yesimbi simbi yekudzedzereka uye yekuwedzera musangano,
- Shanduko yekumisikidza & yekuyedza musangano,
- Pcb kugadzirisa uye kuyedza musangano,
- BLDC mota workshop,
- Magetsi magetsi zvigadzirwa ekupedzisira gungano & yekuyedza musangano.
Iyo yekugadzira yepagore inosvika mamirioni 50 pcs. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kune nyika dzinopfuura makumi matanhatu neshanu nematunhu epasi rese Vazhinji vatengi vedu vakuru vane mukurumbira wepasirese. Mu2019, Staba yakasarudzwa semuenzaniso bhizinesi muNational Export Leader Index.
Munguva yekusimudzira, Staba anotarisisa zvakanyanya kuunganidzwa kwekodzero dzepfuma nekumisikidzwa kwekambani manejimendi manejimendi. Staba ndiro rekutanga bhizinesi mudunhu medu kupasisa kubvumidzwa kweIPMS yeGB / T29490-2013, kuve nematanhatu ekutanga patents muUnited States uye muEuropean Union, uye anopfuura makumi mashanu nemasere ekutanga eChina ekugadzira patent uye ekushandisa modhi patents. Kubva 2014, Staba yakatenderwa / kubvumidzwa zvakare seyenyika yepamusorosoro bhizinesi kwenguva nhatu dzakateedzana, isu tine maviri emakambani tekinoroji nzvimbo: Guangdong Province Intelligent Power Engineering Technology Center, uye Zhongshan Power Chigadzirwa Injiniya Technology Center. Kubva pazuva rekutanga rekumisikidzwa, iyo ERP software system uye ISO9001 manejimendi system yakaitwa mune zvese zvikamu zvekambani manejimendi, ichiona kushanda kwakanaka uye kwakaringana kwesisitimu. Parizvino, tine vashandi mazana matatu nemakumi matatu, avo makumi matatu nematatu vari veR & D system uye makumi matatu nemasere ari ehurongwa hwekutungamira makambani. Panguva imwecheteyo, isu tine kubatana kwakasimba uye kudyidzana kwekubvunzana nemasangano mazhinji ekutsvagisa uye nyanzvi muindastiri, kuyedza kugadzira zvigadzirwa zvedu, masevhisi, uye tekinoroji pamberi peindasitiri.
Staba ikambani inotyairwa nemutengo, ine hunhu hwepamoyo hwakanyanya kushanda, hunyanzvi, uye inotungamirwa nevatengi. Izvo chaizvo nekuda kwekukwanisa kushanda kuti Staba inogona kuwana mubairo wakakwirira kupfuura vezera rayo kuitira kuti zviwanikwa zvakawanda uye purofiti ikwanise kudyarwa muR & D kuitira kuti mari yepakati yeStaba ichengetedzwe kuti igare yakasimba; Kugadziridza kuchengetwa kwevanhu, kufemerwa kwese kweStaba kunobva mukubatsira vane chekuita nekuchengetedza zviwanikwa uye kunzwa zviri nani munzira dzekugadzira - kugadzira - chiteshi - kutaurirana nemutengi; yevatengi-inotarisisa inoratidza maitiro aStaba pamusoro pebasa uye tembiricha yebasa mukati mezviitiko zvese.
Ingotipa zano pane mota kudzora uye mota, isu tinokupa iwe yakazara seti yemhinduro uye yakakwana mota yaunoda. Kutarisira mberi kubatana newe!
Kutanga sefekitori diki, tarisa pane Voltage Stabilizer & UPS
Sole Akavimbiswa Mutengesi wePepsi Cola weVoltage Stabilizer
New workshop ye8,000 m² Yakapasirwa ISO9001 yakasimbiswa Yakatangisa yepasi rose ultra slim wall mount Voltage Stabilizer
Granded China National Hi-tech Enterprise yakasimbiswa
Inotaridzwa seChina Wepamusoro 5 mugadziri weVoltage Stabilizer
Yakatangisa iyo Triac mhando Voltage Stabilizer
Kutanga kuvaka indasitiri paki 40,000m²
Vakapihwa Guangdong Nyowani Akangwara Simba Injiniya Technology Research Center
Staba Industrial Park yakaiswa mukushandisa, kugona kwekugadzira kwakapetwa kaviri.
Intellectual rights rights management system GB / T29490- 2013 yakasimbiswa
Staba BLDC Motor Division yakasimbiswa
PCBA & Small Household Appliances Solution kambani yakagadzwa
Motokari, Vacuum Cleaner, BLDC Fan mota, BLDC mota, Brushless DC mota, Brush isina mota, kubvunza pricelist